Fantaro ny zava-drehetra, mba hahafahanao manao na inona na inona: Ahoana no hanakorontanan'ny 6sense ny indostrian'ny ABM | Martech Zone
Wednesday, May 8, 2019 Alatsinainy, May 6, 2019 Douglas Karr
Niova ny fividianana B2B - ny mpividy ankehitriny tsy fantatra anarana, mizarazara ary mahatohitra. Ny ezaka varotra B2B sy ny varotra dia mitohy miha tsy dia mahomby intsony satria ny ekipa mpamatsy vola dia miady amin'ny fisintomana tsy mitsaha-mitombo avy amin'ny mpanjifa sy ny vinavina ao anaty tontolo efa be olona sy be tabataba. Mba hifaninana sy handresena anio dia tokony hanova ny fomba fiasan'izy ireo handray ekipa ny ekipa mpandray vola B2B fitakian'ireo mpividy B2B maoderina.
Ao amin'ny tontolon'ny fividianana B2B ankehitriny, ny mpividy dia:
Anonymous - Raha ny marina dia 10 isan-jaton'ny mpitsidika tranonkala ihany no mampahafantatra ny tenany.
voazarazara - eo ho eo, 9.6 olona dia mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra mividy B2B mahazatra;
mahatohitra - 70 isan-jato ny tsingerin'ny varotra dia vita alohan'ny ifandraisany amin'ny mpivarotra
Midika izany fa mifehy ny dia ny mpividy. Matetika izany dia mety hahasosotra amin'ireo ekipa misy fidiram-bola izay tsy afaka mifandray amin'ireo mpanjifany tena tsara amin'ny fotoana mety, miaraka amin'ny hafatra mety. Ny marina dia; tsy vahoaka, etika miasa, na olana amin'ny fizotrany akory aza - olan'ny data izany.
Ny lakilen'ny famahana io olana io dia ny fampiasana AI sy Big Data hanomezana ekipa fidiram-bola sary feno kokoa momba ny dian'ny mpividy, manolotra hevi-baovao momba ireo hetsika fantatra sy tsy fantatra. Izany dia mitaky ny fialana amin'ny cobbling miaraka amin'ny rindranasa akany sy ny fampiasam-bola amin'ny sehatra feno afaka misambotra sy manadihady ny angon-drakitra ilaina mba hiresahana ny fomba fividianan'ireo mpividy androany (tsy fantatra anarana, voazarazara, mahatohitra).
Nanana fampiharana Fit Modeling izahay, fampiharana Intent Detection, ary mazava ho azy fa nanao doka izahay. Tamin'ny alàlan'ny 6sense dia afaka nanambatra ireo rehetra ireo ho sehatra iray izay mifamatotra ao anatin'ny sombin-javatra samihafa izahay mba hahazoantsika sary feno momba ny zava-mitranga.
Nick Ezzo, VP an'ny fangatahana fangatahana, Sage Intacct
Fifaninanana sy fandresena amin'ny 6sense
6sense dia natao ho an'ny ekipa Sales and Marketing mifototra amin'ny kaonty maoderina, manome azy ireo fahaiza-manavaka ny fitondran-tena mividy tsy fantatra anarana, mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fotoana sy ny teti-bola miorina amin'ny kaonty eny an-tsena, ary mandresy ireo mpividy mahatohitra amin'ny alàlan'ny fanatontosana fifandraisana manokana amin'ny fantsona maro.
Ny fahaizana manangona, mifandray ary manararaotra ny Insights an'ny mpanjifa no lakilen'ny fahombiazan'ny ABM. Maro ireo mitady teknolojia ABM no manomboka amin'ny fanontaniany izay azon'ny vokatra na ny sehatra atao; inona ny endri-javatra feno napetraka. Tokony hanontany izy ireo hoe ahoana no ampiasana ny Data Insight ho an'ny mpanjifa hahafahany mampiasa sy manome hery ireo fahaiza-manao ireo. Ary na dia mino aza izahay fa ny 6sense amin'ny farany dia hanome ny endri-javatra feno indrindra napetraka manerana ny Varotra sy ny Marketing, ny fototra dia tsy maintsy aorina amin'ny AI-Driven Customer Insights, na raha tsy misy lakolosy sy sifotra midika zavatra iray. Izany no antony manomboka ny tagline antsika Fantaro ny zava-drehetra - ny tanjonay dia ny mametraka ny herin'ny AI sy Big Data ao ambadiky ny matihanina amin'ny varotra sy ny varotra rehetra satria raha manao izany isika dia mino fa afaka 'Manao na inona na inona (saika saika).
Latane Conant Chief Marketing Officer ao amin'ny 6sense
Ny tanjon'ny ABM dia ny fanatsarana ny tanjona, ny fotoana ary ny maha-izy azy. Ity dia mitaky sary feno momba ny dian'ny fividianana ny mpanjifanao, ao anatin'izany ny hetsika tsy fantatra anarana izay ny ankamaroan'ny dia mividy B2B ankehitriny. 6sense no miantso an'ity ho anao Fantsona maizina.
6sense Mpanjifa dia mampiasa ny sehatra handrefesana amin'ny fomba mahomby ny ezaky ny ABM, manatanteraka tranga fampiasana marobe manerana ny Marketing sy ny Sales.
Ny porofo dia ao amin'ny valin'ny mpanjifa
Ireo mpanjifa 6sense dia mijinja ny tombotsoan'ny Orchestration mifototra amin'ny AI-Powered, miaraka amin'ny valiny tena izy toy ny 40% + fampiakarana fahafaha-manao, haben'ny fifanarahana antonony lehibe kokoa, tsingerin'ny varotra haingana, ary taha ambony kokoa. Iray amin'izany ny mpanjifa PGi, mpitarika manerantany amin'ny fiaraha-miasa. Mila mahafantatra i PGi
Ahoana ny fomba hanavahana ny tenany amin'ny tsena misavoritaka sy mifaninana
Ahoana ny fomba hampifantohana ny ezaky ny ABM amin'ny kaonty manandanja
Ahoana ny fomba hiantohana ny fampifanarahana akaiky ny Marketing sy ny Sales
Ny fampiasana 6sense dia afaka nifantoka tamin'ny ezaka tamin'ny kaonty 'eny an-tsena' izy ireo ary nanome fomba fijery tena izy amin'ny Sales mba hahazoana antoka fa ny tetika sy ny hafatra marina dia nahatratra ny vinavina tamin'ny fiandohan'ny fivarotana. Izany dia niteraka a Mihamaro ny 68 isan-jato amin'ny fotoana ifandraisana, fiakarana 77 isan-jato amin'ny tahan'ny fandresena, ary fiakarana 9X amin'ny haben'ny fifanarahana antonony.
Ireo mpanjifa 6sense koa dia afaka mikendry ny fandefasan-kafatra mifototra amin'ny zavatra tena ahin'ny mpividy ary am-pikarohanaany am-pahavitrihana. Mediafly, ilay mpitarika sehatra fampidirana varotra ao amin'ny Evolved Selling ™, dia te hampitombo ny kalitao sy ny habetsaky ny kaonty tonga ao amin'ny tranonkalany. Tian'izy ireo ho fantatra:
Kaonty iza no tonga tao amin'ny tranokalan'izy ireo tsy mitonona anarana, ary iza no nitady ny vahaolana nefa tsy mitsidika ny tranonkalany - aka alao ny tranony mainty
Inona no lohahevitra lehibe momba ny kaonty lehibe momba ny tsena mifototra amin'ny famantarana ireo
Ahoana ny fomba hikendrena ireo programa doka ABM hahatratra ny kaonty tsara indrindra ao amin'ny fantsona maizin'izy ireo
Iza no olona kendrena amin'ny doka fampiroboroboana ABM
Tamin'ny alàlan'ny famakiana ny fantsona maizin'izy ireo sy ny fahazoana ny fividianana fitondran-tena mifototra amin'ny fividianana toetra, Mediafly dia afaka nanatratra ny tanjona kendrena amin'ny fampisehoana ABM amin'ny kaonty marina sy ny personas, ka nahatonga ny tahan'ny tsindry 10X lehibe kokoa amin'ny fampielezana namboarina, ary 10X ary mitombo ny fahafaha-miditra miditra.
Fikambanana marketing sy varotra mitady hampiasa fomba fiasa hahomby sy handanjalanja ny ABM dia tokony handinika ilay sehatra 6sense Account based Orchestration Platform, Powered by AI, fa tsy hiaraka hanangona antontan-kevitra kendrena, angon-drakitra antoko fahatelo, fampirantiana fampiratiana ABM ary analytics. Ny fomba fijerin'ny AI tarihiny dia manome antoka fa ny sehatra 3sense dia manome hafatra marina amin'ny olona mety amin'ny fotoana mety ary manome fahitana amin'ny dian'ny mpividy tanteraka - indrindra ny hetsika miseho tsy fantatra anarana izay eken'ny ekipa B6B Sales sy Marketing maro.
Aza mino izany? Atombohy izao ny fanalana ny fantsom-pizahanao maizina!
Tags: abmmarketing miorina amin'ny kaontyb2braharaham-barotrafantsona maizina